u-Philander uqede i-Australia ekuseni osukwini lokugcina
u-Vernon Philander udinga ama-overs amathathu kuphela ukuthola ama-wicket angu-200 ama-Test kanye nama-wicket angu-50 bedlala ne-Australia ngaphambi ngokuthola i-career-best esheshaya engu-6/21 ekuseni lokugcina kumdlalo wesine we-Sunfoil Test e-Bidvest Wanderers Stadium ngoLwesibili.
Umdlalo osukwini udlalwe kwaze kwaba ingale kwehora njengoba ama-Standard Bank Proteas enqobe ngama-runs angu-492, okukhulu kunakho konke kumlando wase-South Africa.
Banqobe i-series ngo-3-1, okunike ama-Proteas ukunqoba i-Test series ekhaya okokuqala bedlala ne-Australia.
Ngesinye isikhathi u-Philander ube ne-spell esingu-6/3 ngaphambi kokuthi oshayayo wesi-11 u-Josh Hazlewood ashaye ama-boundaries amabili ngasekupheleni kwe-innings. u-Philander uqede enama-career best figures angu-9/51 okubalwa khona i-five-wicket haul yakhe yesi-13 kumsebenzi wakhe. Kwamutholela umklomelo we-Man of the Match. i-best innings yokugcina ka-Philander kwaba u-6/42 akuthola edlala ne-India ekuqaleni kwalonyaka.
u-Philander no-Kagiso Rabada, obizwe njenge-Sunfoil Man of the Series, bahamba phambili ekutholeni ama-wicket kuma-Test kulonyaka, nejngoba benama-wicket angu-31 ku-16 no-38 ku-19 ngokulandelana kwabo, futhi wonke ama-Test abo adlalwe namazwe ahamba phambili emhlabeni kwikhilikithi, i-India ne-Australia.
u-Keshav Maharaj, obekulindeleke ukuthi aphose kakhulu osukwini lokugcina, akalitholanga kahle ithuba lokuphosa njengoba u-Faf du Plessis elethe u-Morne Morkel ukuthi aphosa ukumnika ithuba lokuthola i-wicket yokugcina osukwini lakhe lokugcina kwikhilikithi yama-Test. Ngebhadi, akwenzekanga ngoba i-wicket yokugcina ye-Australia iphume nge-run out.
i-Australia iqede ngaphandle kokuthi umdlali athole ikhulu noma kube ne-partnership yekhulu.
Ama-Proteas abe nabadlali abathathu kulaba abane abathole ama-runs amaningi kwi-series futhi nabathathu kulaba abane abathole ama-wicket amaningi.
Ukuba ngaphezulu kulaba abaphosayo kwi-South Africa kuvezwe ukuthi i-Australia iphoqe ama-Proteas ukuthi athathe ibhola elisha elibomvu kuyona yonke i-series.
Okuhle kwikhilikithi yase-South Africa ukuthi akade behamba phambili ukuthola umklomelo we-Man of the Series abadlali babo ababili abancane, u-Rabada no-Aiden Markram. Kanye nokuqina iqembu elikukhombisile ekunqobeni imidlalo emthathu ilandelana emuva kokuhlulwa kumdlalo wokuqala we-series.
i-Sunfoil Education Trust (SET) isithole imali engango-R980 000 ephuma ko-four no-six abashayiwe kanye nama-wicket akhishwe iwona womabili amaqembu kwi-series. Lokhu kulandele u-R641 000 owahlanganiswa kwi-series yemidlalo emithathu bedlala ne-India no-R417 500 owahlanganiswa kwimidlalo embili bedlala ne-Bangladesh, ukubeka imali yama-Test series amathathu ku-R2 038 500.
u-Bavuma uhlelela ama-Proteas usuku olukhulu u-Markram ubekela ama-Proteas isikhonkwana ngaphambi kokuthi i-Australia iziphindiselele Ama-Proteas afuna ukumvalelisa kahle u-Morkel Ubuhlakane bukaMorne kuhola ukunqoba okukhulu kwama-Proteas nokuba u-Morkel ufinyelela ku-300; uhlelela ama-Proteas ukuba ngaphambili i-CSA ihalalisela u-Morne Morkel ngokungena kwiqembu lo-300 u-Cummins uguqula izinto emuva kwekhulu lika-Elgar elinike Ukubuya kwa-Rabada ‘ukuphakamisa’ okukhulu kuma-Proteas – u-Gibson i-CSA yamukela uphumela wesicelo i-CSA iyaqhela kumamaski zika-SBW; iyaxolisa kwi-CA u-Rabada uwaqalisa kahle ama-Proteas nge-‘fifer’ yakhe yesishagalombili